Nike Training Club - လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းညွှန် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Nike ကသင်တန်းကလပ် - လေ့ကျင့်ခန်း & Fitness လမ်းညွှန်မှု
Nike ကသင်တန်းကလပ် - လေ့ကျင့်ခန်း & Fitness လမ်းညွှန်မှု APK ကို
• 6-အပတ်လမ်းညွှန်ပိန် Get ဖို့နှင့်ထို့ထက် ပို.
သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ပဲပိုမိုလွယ်ကူတယ်။ ကျနော်တို့ဖြောင့်သည်သင်, ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို-အာရုံစူးစိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုကယ်နှုတ် Nike ကမာစတာလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကြီးမှူးမတ်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူပူးပေါင်းပါတယ်။ ယခု Subscribe နှင့်လက်လှမ်းဖို့7ရက်ကြာအခမဲ့စမ်းသပ်ရ:
(မဆိုအခမဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပြီးနောက်) တစ်ခု NTC ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်လလျှင် $ 14.99 (နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း $ 119.99 ဖြစ်ပါတယ်) ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုသည်သင်၏ Google Play စအကောင့်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထား (ရွေးချယ်မည့်အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်. ) လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမည်နှင့်သင့် Google အကောင့် Play မတိုင်မီလက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလ၏အဆုံးမှ 24 နာရီအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ Google က Subscription Center က Play သို့သွားသည့်အချိန်တွင်မဆို Cancel ။ Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့စွဲချက်ကိုရှောင်ရှားရန်, အခမဲ့အစမ်း (ရှိပါက) သို့မဟုတ်လက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလ၏အဆုံးမတိုင်မီအနည်းဆုံး 24 နာရီ cancel ။ NTC ပရီမီယံ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ငါတို့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့်သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသဘောတူသည်။
ဖြောင့်-Up ကို ABS
NTC Premium အပြင်:
သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း tab ကို၏ 'Expert သိကောင်းစရာများ' 'အပိုင်းကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့ရုံကဆက်ပြောသည်ပါတယ်:
Programs ကိုကြား Reset လုပ်နည်း
မှန်ကန်စွာရွေးချယ်အလေးချိန် Pick လုပ်နည်း
Nike ကသင်တန်းကလပ် - လေ့ကျင့်ခန်း & Fitness လမ်းညွှန်မှု
60.01 ကို MB